Caroline Avaratra, Mpianatra Amin’ny Ambaratonga Ambony Mety Ho Fandroahana Ho Any Amin’ny “Fahafatesana Azo antoka”, Na Eo Aza Ny Fanoheran’ny Mpampianatra Sy Ny Filankevi-pitantanan’ny Sekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2016 5:47 GMT
Fiarahamientana samihafa anà mpikatroka mafana fo mpitaky ny rariny ara-piarahamonina miisa eo amin'ny 35.000 eo no nohetsehan'ny Moral Monday Movement, nanao diabe tao afovoan-tanànan'i Raleigh ny volana Febroary 2014. Sary nalaina tamin'ny kaonty Flickr an'i Stephen Melkisethian
Ny alin'ny Alakamisy 11 Febroary 2016, niray hevitra nandany tsy nisy nitsipaka ny fanapahankevitra iray nanamelohany ireo fisamborana sy ny mety handroahana hody ireo mpianany ny sampan-draharahan'ny Sekolim-panjakana ao Durham any Caroline Avaratra, . Ny “Fampiharana ny Fifindramonina sy maha-Olompirenena (ICE)” , ny Masoivohon'ny Departemanta Amerikana misahana ny Filaminana Anatiny (DHS), dia nikendry ny Riverside High School, izay manana taha ambony indrindra amin'ny mpianatra avy any Amerika Latina ao amin'ny rafitry ny sekolim-bahoaka ao Durham (23%), ary ireo sekoly ambony hafa ao amin'ny faritra, ary efa nisy tanora enina sahady farafahakeliny notazonina any ivelan'ny fanjakana.
Lanin'ny filankevi-pitantanan'ny Sekolin'i Durham ny fanapahankevitra mba hanoherana ny bemidin'ny #fifindràmonina atao amin'ireo mpianatra
Ilay mpianatra amin'ny ambaratonga ambony Wildin David Guillén-Acosta no iray amin'ireo kinendrin'ny ICE vao haingana, izay nosamborina teo anoloan'ny tranony raha niala hankany an-tsekoly izy ny 28 Janoary. Nikendry manokana ireo ankizy maro avy any Amerika Afovoany niampita ny sisintanin'i Meksika hankany Etazonia, nandritra ny roa taona lasa farany, ireo fitsipika torolàlana vaovaon'ny DHS izay nambara tamin'ny fotoam-pialantsasatry ny Taombaovao. Nandritra io fotoana io, notaterina ny fitomboan'ny Mara Salvatrucha sy ny fampidirana vondrona tanora maditra tao amin'ny 18th Street, ny fangalarana ary famonoana olona. Kendren'ireny andian-jatovo manao asan-jiolahy ireny manokana ny hampiditra ireo ankizy mpifindra monina avy any Amerika Afovoany, izay matetika mandositra ny herisetra tafakatra ambony be any amin'ny firenen'izy ireo. Tsy azon'ny haraton'izy ireny i Wildin, izay mbola tsy ampy taona fony izy niala tany Honduras ny taona 2014 — kanefa tsy nanakana ny ICE tsy hisambotra azy izany.
Teo am-piandrasana ny fanapahankevitry ny filankevi-pitantanana tao ivelany tao, ny renin'i Wildin, Dilsia Acosta, miteny Espaniola ary adikan'ny mpikatroka mafana fo an'ny NC Dreamteam Viridiana Martínez , nilaza tamim-pitomaniana ny toetra tsaran'ny zanany sy ny hetahetany ho eny amin'ny anjerimanontolo: “Olona tsara izy, tsy mba manana fahazaran-dratsy, ary tsy mbola tafiditra taminà raharaha manahirana.”
Tamin'alahelo no nilazàn'ny anabavin'i Wildin momba ny filana vaniny nataon'ireo andian-jatovo mpisetrasetra tamin'ny anadahiny tany Honduras, ary ny fanapahankeviny hiampita ny sisintany roa taona lasa izay mba hanjohy ireo mpikambana amin'ny fianakaviany, nanazava fa raha averina any Honduras i Wildin, hiatrika “fahafatesana azo antoka izy….Nandrahona azy ny andianà jiolahimboton'ny 18th Street. Nolazain'izy ireo taminy fa, na izy manjohy azy ireo izy, na izy hovonoiny ho faty.”
Tazonina any amin'ny tranon'ny ICE any Georgia ankehitriny i Wildin, lavitry ny fianakaviany sy ireo mpanohana azy. Tsy mbola misy valiny avy tamn'ny DHS hatramin'ny fanambaràny ny 4 Janoary, nanantitra ny fanamafisany ny fanapahankeviny hamerina amin'ny taniny ireo ankizy rehetra avy any Amerika Afovoany tonga tamin'ny taona lasa.
Misy ny Hetsika hanangonan-tsonia hanafahana ny gadran'ny NC 6, miaraka amin'ireo fangatahana hifandraisana amin'ny DHS amin'ny anaran'i Wildin ary ireo tanora dimy hafa mipetraka ao Carolina Avaratra, tanora izay rahonana haverina any amin'ny tany niaviany ihany koa.
Mitombo ny fanohanana ireo mpianatra. Nisy fiaretantory tao Charlotte ny 12 Febroary ho an'ireo tanora any amin'ireo fonjan'ny ICE miandry ny hamerenana azy ireo any amin'ny fireneny, na hita aza fa tsy misy manana rakitra-nà raharaha voaheloky ny lalàna izy ireo, na 18 na 19 taona izy rehetra ireo ankehitriny, niampita ny sisintany fony mbola tsy ampy taona, samy manana tahotra izay ara-drariny momba ny fiverenana any amin'ireo fireneny niaviany izy ireo (izay hanao azy ireo ho sahala amin'ny mpitsoa-ponenana), ary izy rehetra ireo, araka ny fenitry ny DHS, dia samy tsy laharam-pahamehana ny hosamborina sy haverina any amin'ny tany niaviany.
Nahita fihenàna 20% tamin'ny isan'ny mpianatra tonga an-tsekoly ny sekoly ambonin'i Durham taorian'ny bemidina nataon'ny Fifindràmonina.
Miteny amin'ny anaran'ireo mpampianatra namana, nandefa lahatsary hafatra tao amin'ny Facebook i Bryan Proffitt an'i Durham, izay nilazàny hoe “Isaky ny maka ireo ankizinay ianareo, hamaly foana ireo mpampianatra.” Ny fiaretantory manaraka, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny mpianatra iray hafa, Edwin Yonatan Alvarez-Galvez, dia hatao ao amin'ny tanànan'i Cary ny 13 Febroary.